Iindaba-umatshini oneTekhnoloji eNtsha ye-Axle ye-Automobile
Umatshini oneTekhnoloji eNtsha ye-Axle yeemoto
Ii-axles ezinamavili kumacala omabini e-undercarriage (isakhelo) zibizwa ngokudibeneyo njengee-axles zemoto, kwaye ii-axles ezinamandla okuqhuba zibizwa ngokuba zii-axles. Umahluko omkhulu phakathi kwezi zibini kukuba kukho i-drive embindini we-axle (i-axle). Kweli phepha, i-axle yemoto eneyunithi yokuqhuba ibizwa ngokuba yi-axle yemoto, kwaye isithuthi ngaphandle kwe-drive sibizwa ngokuba yi-axle yemoto ukubonisa umahluko.
Ngokunyuka kwemfuno yezothutho kunye nokuhamba, ukongama kwee-axles zemoto, ngakumbi iitreyila kunye ne-semi-trailer, kuthutho lobuchwephesha kunye nemisebenzi ekhethekileyo iya icaca ngakumbi, kwaye imfuno yentengiso inyuke kakhulu.
Olu hlalutyo lobuchwephesha inkqubo yomatshini we-axle, ithemba lokunceda abathengi ukuba bakhethe umatshini we-CNC ofanelekileyo.
Inkqubo entsha yemveliso ye-axle yemoto iyonke:
Ukusuka kwinkqubo entsha yokuvelisa, umatshini wokungqusha osetyenziselwa umatshini (i-axle eqinileyo) okanye umatshini wokudikayo omacala omabini (i-asi egobileyo) kunye ne-CNC lathe, i-OP1 yokusila, i-OP2, i-OP3 yokujika ulandelelwano, kunye ne-OP5 yokomba kunye nokusila Inokutshintshwa. ngesiphelo kabini CNC lathe OP1.
Kwii-axles eziqinileyo apho i-shaft ye-diameter ayifuni ukucinywa, yonke imixholo yomatshini inokugqityezelwa kwisethingi enye, kubandakanywa i-grooves engundoqo yokugaya kunye ne-drilling imingxuma ye-radial. Kwii-axles ezingenanto apho i-shaft i-diameter ayifuni ukucinywa, umgangatho wokuguqula ukuguqulwa ngokuzenzekelayo unokuphunyezwa kwisixhobo somatshini, kwaye umxholo womatshini unokugqitywa ngesixhobo esinye somatshini.
Khetha i-axle enesiphelo esiphindwe kabini i-axle ekhethekileyo ye-CNC yokutshiza i-axles inciphisa kakhulu indlela yokwenza, kwaye uhlobo kunye nobuninzi bezixhobo zomatshini ezikhethiweyo nazo ziya kuncitshiswa.
Inzuzo kunye nenqaku lomatshini omtsha wokukhetha inkqubo:
I-1) Ugxininiso lwenkqubo, ukunciphisa amaxesha e-workpiece clamping, ukunciphisa ixesha lokuncedisa ukuncedisa, usebenzisa iteknoloji yokucubungula ngexesha elinye kuzo zombini iziphelo, ukusebenza kakuhle kwemveliso kuphuculwe kakhulu.
I-2) Ukubethelwa kwexesha elilodwa, ukuqhutyelwa kwangaxeshanye kuzo zombini iziphelo kuphucula ukuchaneka kwe-machining kunye ne-coaxiality ye-axle.
3) Nciphisa inkqubo yokuvelisa, ukunciphisa ukuthengiswa kweengxenye kwindawo yokuvelisa, ukuphucula ukusebenza kakuhle kokusetyenziswa kwendawo, kunye nokunceda ukuphucula umbutho kunye nolawulo lwemveliso.
I-4) Ngenxa yokusetyenziswa kwezixhobo zokusebenza eziphezulu, inokuxhotyiswa kunye nokulayishwa kwezixhobo kunye nezixhobo zokugcina ukuphumeza imveliso ezenzekelayo ngokupheleleyo kunye nokunciphisa iindleko zabasebenzi.
I-5) I-workpiece igxininiswe kwindawo ephakathi, i-clamping inokwethenjelwa, kwaye i-torque efunekayo yokusikwa kwesixhobo somatshini yanele, kwaye inani elikhulu lokujika linokwenziwa.
I-6) Isixhobo somatshini sinokuxhotyiswa ngesixhobo sokufumanisa ngokuzenzekelayo, ngakumbi kwi-axle engenanto, enokuqinisekisa ubukhulu obufanayo be-axle emva komatshini.
7) Kwii-asi ezivulekileyo, xa imingxuma yangaphakathi kwiziphelo zombini ze-OP1 yokulandelelana igqityiwe, umthengi wemveli uya kusebenzisa isiphelo esinye ukuphakamisa i-clamp kunye nesinye isiphelo sokusebenzisa i-tailstock ukuqinisa i-workpiece yokujika, kodwa ubukhulu umngxuma ongaphakathi wahlukile. Kumngxuma omncinci wangaphakathi, ukuqina kokuqina akwanelanga, i-torque ephezulu yokuqina akwanelanga, kwaye ukusika okusebenzayo akunakugqitywa..
Kwi-lathe yobuso obuphindwe kabini, i-axle evulekileyo, xa imingxuma yangaphakathi kwiziphelo zombini zesithuthi igqityiwe, umatshini utshintsha ngokuzenzekelayo imowudi yokudibanisa: iziphelo ezimbini zisetyenziselwa ukuqinisa i-workpiece, kwaye i-drive ephakathi idada kwindawo yokusebenza. ukuhambisa itorque.
I-8) I-headstock ene-workpiece eyakhelwe-ngaphakathi ye-hydraulic clamping inokuhanjiswa kwicala lika-Z lomatshini. Umthengi unokubamba isikhundla kwityhubhu yesikwere esiphakathi (ityhubhu ejikelezileyo), indawo yeplate esezantsi kunye nendawo ye-shaft diameter ye-axle njengoko kufuneka.
Ukujonga le meko ingentla, ukusetyenziswa kwe-double-end CNC lathes kumatshini we-axles yemoto kunenzuzo ebalulekileyo kwiinkqubo zendabuko. Ithekhnoloji yokuvelisa ephuculweyo enokuthi ithathe indawo yezixhobo zoomatshini bemveli ngokwenkqubo yokuvelisa kunye nokwakhiwa komatshini.